:: My Little World ::: Dinner - 20090306
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2009 10:30:00 PM
တို့များကတော့ နန်းကြီးသုပ် နန်ပြားသုပ် အကုန်ကြိုက်။ နန်းကြီးသုပ်ကို ပဲမှုန့်စေးစေးလေးနဲ့ သုပ်ထားတာဆိုလွှတ်ကောင်း။ ခေါက်ဆွဲစားရင် ခေါင်းမူးတယ်ဆိုတော့ အစာမကျေချင်တဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။
၀ိတ်ချစရာမလိုဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ညစာ မစားတဲ့အကျင့်လုပ်ရတာလဲ???
Saturday, March 07, 2009 12:20:00 AM
ကြည့်ရတာ Clementi မန္တလေးဆိုင် က နန်းကြီးသုတ်နဲ့ တူတယ်။ တခြား မြန်မာဆိုင်ဆိုရင် Ice Lemon Tea ကို အဲဒီလို ခွက်မျိုးနဲ့ ထည့်မပေးဘူး။ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည် ထည့်ပေးတာလဲ တူတယ်။ စားပွဲကလည်း အဲဒီလို စားပွဲမျိုးပဲ။ စုံထောက်ကြီး မဂွိစ် ၏ တပည့် Analysis လုပ်သွားပါတယ်။
Saturday, March 07, 2009 12:32:00 AM
စားချင်စဖွယ်ပဲ.. နန်းကြီးသုပ် ပွဲက ခါတိုင်း နေနေစားနေကျ ထမင်းပွဲတွေရဲ့ တ၀က်ပဲ ရှိမယ်နော်.. ညနေစာမို့လို့ ထင်တယ်
Saturday, March 07, 2009 1:40:00 AM
တို့လည်းမနေ့က နန်းကြီးသုတ်နဲ့ ကြာဆံချက်
Saturday, March 07, 2009 4:44:00 PM
MrDBA ပြောသလို အစာမကျေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်.. ခေါက်ဆွဲလုပ်တာမှာ ပါတဲ့ ဘာနဲ့ မတည့်လဲ မသိဘူး.
Ko jurassic နဲ့Ma KOM က ဘာတွေရှင်း ခိုင်းနေတာလဲ.. ကျွန်မ ရေးထားတာ တချို့ ရက်တွေမှာ ညစာကို ထမင်းမစားဘူး ပြောတာလေ.. ညစာ မစားဘူးမှ မပြောတာ.. ထမင်း မဟုတ်တာတွေ စားပါတယ်။
နေ့ တိုင်း ညစာဆို ထမင်းလုံးဝ မစားဘူးလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တချို့ ညစာတွေ ထမင်း စားပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း အစားအသောက် နည်းနည်း ဂရုစိုက်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါမှ အကျင့်ဖြစ်မှာ။ ကိုယ်အကျင့်ရှိမှ သူများကို လိုက်လုပ်ခိုင်းလို့ ရမှာ။
ကြည် ပြောတာ မှန်မမှန် ကျွန်မကို အပြင်မှာ သိသူတွေ မေးကြည့်လေ။ :P
စုံထောက်ကြီး ZT အား လေးစားပါ၏။
မီယာ .. ကျွန်မအတွက်ဆို ဒီနန်းကြီးသုတ်က နည်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ ဗိုက်ပြည့် ပါတယ်။ ထမင်းမဟုတ်တာပဲ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
Saturday, March 07, 2009 4:55:00 PM